Taliyaha Ciidama Mareykanka ee Afrika Jeneral Stephen Townsend oo booqasho ku tagay Dalka Itoobiya.. | YoobsanNews.com
Taliyaha Ciidama Mareykanka ee Afrika Jeneral Stephen Townsend oo booqasho ku tagay Dalka Itoobiya..
Kulankan ay labada masuul yeesheen ayaa looga hadlay iskaashiga amni ee ay Mareykanku la leeyihiin Ethiopia. Waxaa sidoo kale laga wada hadlay howlgalka Midowga Afrika, iyo xasilloonida muddada fog ee Bariga Afrika.
“Itoobiya waxay door muhiim ah ka ciyaartaa hoggaanka gobolka iyo qaaradda oo dhan,” ayuu yiri Townsend.
Wuxuu isaga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in Itoobiya ay “qaadatay tallaabada la dagaalanka argagixisada iyo howlgallada nabad ilaalinta. Dadaalladan, oo ay weheliso rabitaankooda horumarinta iyo kobcinta awoodaha amniga, waxay gacan ka gaysatay abuuritaanka gobol nabdoon.”
Safiirka Mareykanka ee Itoobiya, Michael Raynor, ayaa la socday Townsend intii uu ku jiray kulamada. Mr. Raynor ayaa xusay in booqashada taliyaha ay hoosta ka xariiqeyso sida ay Mareykanka uga go’antahay taageeridda dadaallada dib-u-habeeynta ee ka socda Itoobiya.
Previous: Haweeneydii aflagaadeysay madaxweyne Trump oo xil loo doortay.
Next: Guddoomiyaha xilka laga qaaday ee Baarlamaanka Puntland C/xakiin Dhoobo Daareed oo ka hadlay weerarkii xalay..